Impilo: iziphumo zengqondo zoononophala | Umvuzo weZiseko
Ikhaya impilo Iimpawu Zengqondo Zobunono
Ubhubhane weCovid-19 uthetha ukuba abantu kwihlabathi liphela banengxaki yoxinzelelo ngakumbi ngenxa yenguqu kunye nokungaqiniseki okubangelwa yile ntsholongwane kubomi bethu bemihla ngemihla. Uninzi lubuyela kwimifanekiso engamanyala ukuze luzolise uxinzelelo okanye uxinzelelo, okanye ufumane ukonwaba ngokukhawuleza. Umzi mveliso we-porn wezigidi ngezigidi zeedola uthatha ithuba labantu abaninzi ukuba bazive bekruqukile ngelixa bebambekile ekhaya kwaye banikezela ukufikelela simahla kwiindawo zepremiyamu ukukhuthaza ukusetyenziswa. Umceli mngeni okhoyo kukuba ukulungiswa okukhawulezileyo kuhlala kunemingcipheko efihliweyo, njengokuxhomekeka kancinci kancinci okunokubangela ukusetyenziswa gwenxa kunye nokulutha kwabanye. La maphepha alandelayo aya kukunceda ukuba uyazi ngakumbi ngomngcipheko kunye nento onokuyenza ukuze usebenzise iindlela ezingcono zokujamelana ngeli xesha. Into yokugqibela oyifunayo kukongezwa koxinzelelo kunye nokungonwabi obekuya kuthintela ngolwazi oluncedo kwangoko.
Nazi izicatshulwa ezibini ezinokuqwalaselwa xa ucinga ngempembelelo ye-porn kwimpilo yengqondo:
"Kuzo zonke izinto ezenziwa kwi-intanethi, iphonografi inamandla okuba likhoboka," yatsho i-Dutch neuroscientists Meerkerk okqhubekayo. Ngo-2006
“Ubomi bakho buyatshintsha xa unolwazi olusebenzayo ngengqondo yakho. Kuthatha ukuziva unetyala xa usazi ukuba kukho isiseko sebhayoloji kwimiba ethile yeemvakalelo, utshilo ugqirha wezifo zengqondo uGqirha John Ratey, (P6 Intshayelelo yencwadi ethi "Spark!").
Ngaphambi kokuba singene kwiinkcukacha ezithe kratya malunga nokusetyenziswa gwenxa kwe-porn ngokuhamba kwexesha, masikhumbule ukuba kutheni kubalulekile ukuyicelomngeni. I-intanethi ye-intanethi inqanda umnqweno kunye nokwaneliseka ngobomi bokwenene, ubudlelwane bezesondo. Yintlekele leyo njengoko uthando lwezesondo kunye nokusondelelana ziphakathi kwamanye amava amahle esinokuba nawo njengabantu.
Ukufunda malunga neZiphumo zeTyala
Oku kufunda ngeziphumo ze-porn kwingqondo kuyeyona nto ibalulekileyo ekuncedeni abantu boyise uluhlu olubanzi lweempembelelo ezingalunganga zomzimba kunye nezomzimba ngenxa yokusebenzisa gwenxa iphonografi. Ukuza kuthi ga ngoku, zingaphaya Izifundo ze-85 edibanisa impilo enkenenkene yengqondo kunye neemvakalelo ekusebenziseni iphonografi. Ezi ziphumo zivela kwinkungu yengqondo kunye noxinzelelo lwentlalo ukuya kuthi ga ukudangala, umfanekiso omzimba ongathandekiyo kunye nezinto ezingasemva. Ukuphazamiseka kwindlela yokutya, ukunyuka kwabantu abancinci, kubangela ukusweleka okungaphezulu kunaso nasiphi na isifo sengqondo. Iphonografi inefuthe elikhulu kwimibono efanelekileyo yomfanekiso womzimba.
Nokuba iiyure ezintathu zokusebenzisa iphonografi ngeveki kunokubangela ukuba zibonakale Ukucuthwa kwento engwevu kwiindawo eziphambili zobuchopho. Xa ukunxibelelana kwengqondo kubandakanyeka, oko kuthetha ukuba banefuthe kwindlela yokuziphatha nakwimood. Ukuzinkcinkca rhoqo kwi-intanethi kwi-intanethi kunokubangela abanye abasebenzisi ukuba baphuhlise iingxaki zempilo yengqondo, ukusetyenziswa okunyanzelekileyo, kunye nokuba likhoboka. Oku kuphazamisa kakhulu kubomi bemihla ngemihla kunye neenjongo zobomi. Abasebenzisi bahlala bethetha ngokuziva 'bethe nca' kulonwabo lwemihla ngemihla.
Bona le vidiyo yemizuzu emi-5 apho a I-neurosurgeon icacisa utshintsho lwengqondo. Nantsi ikhonkco kuphando oluphambili kunye nezifundo kwimpilo ehluphekileyo ngokwasengqondweni nangokweemvakalelo, kunye neziphumo zokuqonda okungathathi ntweni. Ezi ziphumo zichaphazela amandla omsebenzisi okuphumelela kakuhle esikolweni, ekholejini okanye emsebenzini. Bona yethu SIMAHLA izicwangciso zesifundo yezikolo ukunceda abafundi ukuba bazi ngeziphumo zempilo ye-porn kwimpilo yabo kunye nokukwazi ukufikelela esikolweni.
Nangona ukuzinkcinkca ngephonografi ngokuhamba kwexesha kunokubangela iingxaki zempilo yengqondo, abanye abantu baye babandezeleka ebomini babo kwaye basebenzisa iphonografi ukuze bazithobe. Kwezi meko, abantu bafuna uncedo lokuphinda banxibelelane nemizimba yabo ukubanceda balawule isiganeko esibuhlungu esibagcina bevaleleke kwiindlela zokuziphatha ezingalunganga. Singayincoma incwadi ngugqirha wezonyango kunye nophando ngezifo zengqondo uNjingalwazi Bessel van der Kolk,Umzimba ugcina amanqaku”Ezinze e-USA. Kukho iividiyo ezilungileyo kunye naye kwi-YouTube ethetha ngeendlela ezahlukeneyo zengozi kunye ezahlukeneyo (ubuchopho besandla) zonyango ezisebenzayo. Kule icebisa amandla e yoga njengolu hlobo lonyango. Kule imfutshane uthetha ngayo u lonwabo kunye noxinzelelo lwasemva koxinzelelo. Apha uthetha ngaye umothuko kunye nokuncamathiselwa. Le inxulumene nomothuko abantu abaninzi abuva ngenxa ye bhubhane, I-COVID19. Izele ngamacebo obulumko.
Uluhlu olungezantsi lubeka ezona mpembelelo ziphambili ziqwalaselwa ngabasebenzi bezempilo kunye nokufumana kwakhona abasebenzisi kwiwebhusayithi zokubuyisela ezifana NoFap kwaye RebootNation. Iimpawu ezininzi azibonwa de umsebenzisi ayeke iiveki ezimbalwa.
Ushwankathelo lweengozi zeManyala
Umkhwa wokubukela amanyala unokubangela ezi ngxaki zilandelayo:
ukurhoxa kwimicimbi yezentlalo
ukuphuhlisa ubomi bemfihlo
ukuxoka nokukhohlisa abanye
Ukuzicingela iziqu zakho
Uziva unomsindo kwaye unxunguphele
Ukuhlangabezana nokutshintsha kwemozulu
uxinzelelo olugcweleyo kunye nokoyika
Ukuziva ungenamandla ngokunxulumene ne-porn
Ukwabelana ngesondo nabanye abantu
ukuphatha abantu njengezinto zesondo
ukugweba abantu ngokuyintloko ngokwamalungu emizimba yabo
Ukungazihloniphi iimfuno zabanye abantu zangasese kunye nezokhuseleko
Ukungakhathali malunga nokuziphatha okuyingozi ngokwesondo
Ukuzibandakanya ekuziphatheni okuyingozi kunye nokuziphatha okuyingozi
ukufikelela kwi-porn emsebenzini okanye esikolweni
ukufikelela kwimifanekiso yokuphathwa gadalala kwabantwana
nenxaxheba ekuhlaziseni, ekuhlukumezeni, kubundlobongela, okanye kulwaphulo mthetho ngokwesondo
ukuvelisa, ukusasaza okanye ukuthengisa imifanekiso engamanyala
ukuzibandakanya kwezesondo ngendlela engakhuselekanga neyenzakalisayo
ubudlelwane bonakaliswa kukunganyaniseki kunye nenkohliso malunga nokusebenzisa imifanekiso engamanyala
Iqabane lijonga iphonografi njengokungathembeki, okt.
Iqabane liyanda kwaye linomsindo
ubudlelwane buyehla ngenxa yokungathembani nentlonipho
Iqabane lixhalabele intlalo-ntle yabantwana
iqabane livakalelwa kukuba alifanelekanga ngokwesondo kwaye lisongelwa yi-porn
Ukuphulukana ngokusondeleyo ngokweemvakalelo kunye nokuzonwabisa okwabelana ngesondo
Ukuphulukana komdla wesini kunye neqabane lokwenene
ubunzima bokuvuka kunye / okanye ukufezekisa i-orgasm ngaphandle kwe-porn
iingcinga ezingathandekiyo, iifoto, kunye nemifanekiso ye-porn ngexesha lokwabelana ngesondo
ukufuna ngokwesondo kunye nokuba rhabaxa ngokwesini
ukuba nobunzima bokudibanisa uthando nokukhathalela ngesondo
Ukuziva ulwabelana ngesondo ngaphandle kolawulo kunye nokunyanzelwa
ukunyusa inzala kumngcipheko, ukonakalisa, ukuxhaphaza, kunye / okanye ngokwesondo
ukungoneliseki okukhulayo ngesondo
Dysfunctions ngokwesondo-ukungakwazi ukuba semnyameni, ukumiliselwa komzimba, ukungasebenzi kakuhle komzimba
Ukuziva unqamleze kumaxabiso abantu, iinkolelo kunye neenjongo
Ukuphulukana nengqibelelo yobuqu
iimvakalelo ezingapheliyo zokuziva unetyala kunye nehlazo
iimvakalelo zilawulwa yi-porn
Ukungahoyi iinkalo ezibalulekileyo zobomi
Impilo yakho (ukuthoba ubuthongo, ukudinwa, kunye nokuzikhathalela)
Ubomi bosapho (ukungahoyi iqabane, abantwana, izilwanyana zasekhaya kunye noxanduva lwasekhaya)
imisebenzi nezinto ezenziwa esikolweni (kuncitshiswe kugxilwe, ukuvelisa, kunye nenkqubela phambili)
iimali (inkcitho kwizinto ezibonisa amanyala)
ubumoya (ukwahlukaniswa nokholo kunye nezinto zokomoya)
Ukufuna i-porn kakhulu kwaye ngokuqhubekayo
ubunzima ukulawula iingcinga, okanye ukuboniswa, kunye nokusebenzisa imifanekiso engamanyala
ukungakwazi ukuyeka ukusetyenziswa kwe-porn ngaphandle kweziphumo ezibi
ukusilela okuphindaphindiweyo ukuyeka ukusebenzisa i-porn
Ukufuna umxholo ogqithisileyo okanye ukubhengeza okukhulu kwi-porn ukufumana isiphumo esifanayo (iimpawu zokuhlala)
Ukufumana ukungonwabisi kunye nokungakhathali xa uncitshiswe i-porn (iimpawu zokurhoxa)
Olu luhlu lungasentla luhlengahlengiswe kwincwadi "I-Trap TrapNgu-Wendy Malz. Jonga ngezantsi ukuze uxhase uphando.
"Ukushisa kwexesha" kunye noLwaphulo-mthetho ngokwesondo
Kolu phando lunomdlaUbushushu beXeshana: Iziphumo zokuVuswa kwesondo ekuthatheni izigqibo", Iziphumo zibonisa ukuba" umtsalane wemisebenzi ucebisa ngezenzo zokuvuselela inkanuko yesini njengesixhobo sokukhulisa uhlobo "emadodeni amancinci ...
“Impembelelo yesibini ekufumaneni kwethu iziphumo kukuba abantu babonakala benolwazi olunqongopheleyo kwifuthe lokuvuseleleka ngokwesondo kwezigqibo zabo nakwindlela abaziphatha ngayo. Ukuxabisa okungaphantsi kunokubaluleka ekuthathweni kwezigqibo ezizimeleyo kunye noluntu.
“… Ezona ndlela zisebenzayo zokuzibamba mhlawumbi ayingomnqweno (oboniswe ukuba awunamsebenzi ulinganiselweyo), kodwa endaweni yokuphepha iimeko apho umntu eza kuvuswa aze aphulukane nolawulo. Nakuphi na ukusilela ekuxabiseni impembelelo yokuvuseleleka ngokwesondo kwindlela oziphethe ngayo kunokukhokelela kumanqanaba angonelanga okuphepha iimeko ezinjalo. Kwangokunjalo, ukuba abantu abawuxabisi amathuba abo okuba babelane ngesondo, kunokwenzeka ukuba basilele ukuthatha amanyathelo okuthintela umonakalo onokubakho kwezi ntlanganiso. Umntu okwishumi elivisayo owamkela '' yithi hayi, '' umzekelo, unokuziva kungafuneki ukuzisa ikhondom ngomhla, oko ke kwandisa kakhulu amathuba okuba ukhulelwe okanye usasaze ii-STD ukuba ugqibela ngokufumana ubushushu. Okwangoku. ”
Kwale ndlela inye isebenza ngendlela efanayo. Ukuba abantu bagweba indlela yokuziphatha kwabanye esekwe ekubajongeni xa bengavuswanga ngokwesondo, kwaye besilele ukuxabisa ifuthe lokuvuseleleka ngokwesondo, baya kuthi babanjwe bothuswa kukuziphatha komnye xa bevukile. Ipateni enjalo inokuba negalelo ngokulula kudlwengulo lomhla. Ewe inokudala imeko egqwethekileyo apho abantu abangakhange batsaleleke kangako kwimihla yabo kunokwenzeka ukuba badlwengulwe ngenxa yokuba bengavuswanga ngokwabo bayasilela ukuqonda okanye ukuqikelela indlela omnye umntu aziphethe ngayo. ”
“Lilonke, uphononongo lwangoku lubonisa ukuba inkanuko yesini ichaphazela abantu ngeendlela ezinzulu. Oku akufuneki kumangalise kuninzi lwabantu abanamava ngokuvuselela inkanuko yesini, kodwa ubukhulu beziphumo ziyamangalisa. Kwinqanaba elisebenzayo, iziphumo zethu zibonisa ukuba iinzame zokukhuthaza ukhuseleko, isini esifanelekileyo kufuneka sigxile ekulungiseleleni abantu ukuba bajongane '' nobushushu bomzuzwana '' okanye bayiphephe xa inokuthi ikhokelele ekuziphatheni okuzenzakalisayo. Imizamo yokuzeyisa ebandakanya ukuluhlaza amandla (I-Baumeister & Vohs, 2003) kungenzeka ukuba zingasebenzi xa kujongwa utshintsho olunamandla lokuqonda kunye nenkuthazo ebangelwe kukuvuka. ”
Jonga intetho yeTEDx nguDan Ariely Ukuzilawula.
Umlutha-iziphumo zokulala, ukusebenza, ubudlelwane
Iziphumo ezisisiseko zokubukela i-intanethi kakhulu kwi-intanethi okanye nokuba yimidlalo yindlela ezichaphazela ngayo ukulala. Abantu baphelela 'kukudinwa kunye nokudinwa' kwaye abakwazi ukugxila emsebenzini ngosuku olulandelayo. Ukuluma rhoqo kwaye ukufuna loo mvuzo we-dopamine hit, kunokukhokelela kumkhwa onzulu ekunzima ukukhaba kuwo. Inokubangela kwakhona 'ukufunda' likhoboka. Kulapho umsebenzisi aqhubekeka nokufuna into okanye isenzo ngaphandle kweziphumo ezibi-ezinje ngengxaki emsebenzini, ekhaya, kubudlelwane, njl.njl. Oku kuyabaqhuba babuyele kuyo kwakhona kwaye kwakhona ukuzama nokubuyisela iimvakalelo zovuko. Umlutha ungaqala xa uzama ukumelana nawo uxinzelelo, kodwa ikwabangela ukuba umsebenzisi azive enoxinzelelo. Ngumjikelezo ombi.
Xa ibhayoloji yethu yangaphakathi ingaphandle kwemali, ingqondo yethu enengqondo izama ukutolika oko kwenzekayo kusekwe kumava adlulileyo. I-dopamine ephantsi kunye nokuphelisa ezinye i-neurochemicals ezinxulumene nazo kunokuvelisa iimvakalelo ezingathandekiyo. Babandakanya ukungazithembi, indlala, uxinzelelo, ukudinwa, amandla asezantsi, umsindo, ukuthanda, uxinzelelo, isizungu kunye noxinzelelo. "Ukuzitolika" indlela esivakalelwa ngayo kunye nonobangela wengxakeko, kuchaphazela indlela esiziphatha ngayo. Ngaphandle kokuba abantu bayeke ukubukela i-porn baqonde ukuba umkhwa wabo ungunobangela wokungakhathali kubomi babo.
Sihlala sifuna ukuzicingela ukungavisisani neemvakalelo zethu ezingathandekiyo malunga nezinto zethu okanye indlela esizithandayo. Senza oku ngaphandle kokuqonda ukuba mhlawumbi kukuzinkcinkca ngokugqithisileyo kokuziphatha okanye into ebangele imvakalelo ephantsi kwasekuqaleni. Isiphumo se-hangover sisiphazamiso se-neurochemical rebound. EScotland, abo basela utywala abanengxaki ye-hangover ngosuku olulandelayo bahlala besebenzisa intetho eyaziwayo. Bathetha ngokuthatha "iinwele zenja ezikulileyo". Oko kuthetha ukuba banesinye isiselo. Ngelishwa kwabanye abantu, oku kungakhokelela kumjikelo ombi wokungqubeka, uxinzelelo, ukugoba, ukudakumba njalo njalo.
Imifanekiso engamanyala kakhulu…
Isiphumo sokubukela kakhulu, ukuvuselela kakhulu i-porn kunokukhokelela ekungahambelani kunye neempawu ezixinzelelweyo kakhulu. Kunokuba nzima ukubona ukuba ukusebenzisa ii-porn kunye nokutya iziyobisi kunokuba nefuthe elifanayo ngokubanzi kwingqondo, kodwa kunjalo. Ingqondo iphendula ekukhuthazeni, kumachiza okanye ngenye indlela. Iziphumo azimisi kwi-hangover nangona kunjalo. Ukufumana rhoqo ezi zinto zinokuvelisa utshintsho kubuchopho kunye neziphumo ezinokubandakanya oku kulandelayo:
Uphando lubonisa ukuba ukusela iphonografi kuhambelana ne ukungabikho kokuzibophezela kumlingane womlingane. Ukuziqhelanisa nobutsha obuqhubekayo kunye nokwanda kwamanqanaba okuvuka okubonelelwa ngoononophala kunye nengcinga yokuba kusenokubakho umntu 'oshushu' kwividiyo elandelayo, kuthetha ukuba ingqondo yabo ayisaphakanyiswa ngamaqabane obomi bokwenyani. Inokumisa abantu abafuna ukutyala imali ekuphuhliseni ubudlelwane bobomi bokwenyani. Oku kupela usizi phantse kuye wonke umntu: amadoda kuba awazuzi kubushushu kunye nokunxibelelana nobomi bobomi bokwenyani obuzisayo; kunye nabasetyhini, kuba akukho sixa sonyuselo lwezithambiso esinokugcina indoda inomdla onengqondo yayo ikwimeko yokufuna amanqanaba aqhelekileyo kunye namanqanaba angaqhelekanga okukhuthaza. Yimeko engaphumeleli.
Iingcali zonyango nazo zibona ukwanda okukhulu kwabantu abafuna uncedo lokuba likhoboka lokufumana ii-apps zokuthandana. Isithembiso esiyinyani sokuhlala siyinto engcono ngonqakrazo olulandelayo okanye swipe, sinqande abantu bagxile ekwazini umntu omnye kuphela.
Kwisifundo samadoda aneminyaka yobudala eyunivesithi, ubunzima bokusebenza kwentlalo ukwanda njengoko ukusetyenziswa kwezithombe ezingamanyala. Oku kusebenza kwiingxaki zeengqondo ezifana nokudandatheka, uxhalaba, uxinzelelo kunye nokunciphisa ukusebenza komphakathi.
• Ukufundwa kwamadoda aseKorea afundisiweyo kwi-20 yawo efunyenweyo Ukukhetha ukusebenzisa iphonografi ukufezekisa kwaye ugcine uchulumanco ngesondo. Bayifumene inomdla ngakumbi kunokwabelana ngesondo neqabane.
Ukusetyenziswa kwamanyala kuboniswe kuye kunciphisa amandla omntu wokulibazisa ukuxhaswa kweminye imbuyekezo ebalulekileyo yesikhathi esizayo. Ngamanye amagama, ukubukela i-porn kwenza ungabi nengqondo kwaye ungabi nako ukuthatha izigqibo ezicacileyo kumdla wakho njengokwenza umsebenzi wasekhaya kunye nokufunda kuqala endaweni yokuzonwabisa nje. Ukubeka umvuzo ngaphambi komzamo.
• Kuhlolisiso lwabafana abaneminyaka eyi-14, amanqanaba aphezulu kwi-intanethi yokusetyenziswa kweefayili yaholela ekubeni umngcipheko wokunciphisa umgangatho wokufunda, kunye nemiphumo ebonakalayo emva kweenyanga ezintandathu.
Umntu ongamanyala uyabukela…
Okuya kuthanda ukubonwa ngamanyala umntu, kokukhona kuya kuba lula ukuyisebenzisa xa usabelana ngesondo. Ingamnika umnqweno wokuthatha izikripthi zeempapasho kunye nomlingani wakhe, udibanise ngamabomu imifanekiso yecalografi ngexesha lokwebelana ngesondo ukuze uhlale evuselela. Oku kukhokelela kwiinkxalabo malunga nokusebenza kwakhe ngokwesondo kunye nomzimba. Ukuqhubela phambili, ukusetyenziswa koonografi okugqithisileyo kwakunxulumene kakubi kunye nokuzonwabisa ngokuziphatha okubi ngesondo kunye neqabane.
Umnqweno ophantsi weSini
Kwisifundo esinye, abafundi abagqibe kwisikolo samabanga aphakamileyo baxhuma unxibelelwano oluluqilima phakathi kwamanqanaba aphezulu okusebenzisa kakubi iphonografi kunye umnqweno ophantsi wesondo. Isiqingatha sabathengi abaqhelekileyo kweli qela babike impendulo engavumelekanga ngesondo.
• I-2008 Study of Sexuality in Fransi ifumene ukuba i-20% yamadoda i-18-24 "ayikho inzala kwisini okanye umsebenzi wesondo". Oku kuhambelana kakhulu neentetho zesizwe saseFransi.
• EJapan kwi-2010: urhulumente oseburhulumenteni survey ifumene ukuba i-36% yabesilisa abaneminyaka eyi-16-19 "abanomdla kwisini okanye abanokuphikisa". Zikhetha idonsa okanye i-anime.
Ukuthanda izinto zesondo…
Kwabanye abantu, kunokungalindelekanga ukuziphatha okubi ngokwesondo ezibuyela umva xa ziyekile ukusebenzisa iphonografi. Nanku umba abantu ngqo ukubukela i-gay porn, izitabane zibukele ngqo i-porn kunye neiyantlukwano ezininzi. Abanye abantu bakhulisa ukukhula kwezesondo kunye nezinto abanomdla kuzo ngokwesini kude nendlela abathanda ngayo ngokwesondo. Ayisiyongxaki ukuba sithini okanye sibonisa ntoni ngokwesini, Ukusetyenziswa gwenxa kwezinto ezingamanyala kwi-intanethi kunokubangela utshintsho olukhulu kwingqondo. Utshintsha kokubini ukusebenza kwengqondo kunye nokusebenza. Njengoko wonke umntu wahlukile, akukho lula ukuthi ingakanani i-porn eyaneleyo kulonwabo nje ngaphambi kokuqala ukwenza utshintsho. Ukutshintsha incasa zesini luphawu, nangona kunjalo, lokutshintsha kwengqondo. Ingqondo yomntu wonke iya kusabela ngendlela eyahlukileyo.
Jonga kwi candelo lethu Ukuyeka Ukuzixhamla uncedo oluninzi kunye namacebiso.
<< Ibhalansi kunye nokungalingani Iziphumo zomzimba >>